कसरी र किन प्रभुको बप्तिस्मा मनाउने?
आध्यात्मिक विकास, धर्म
यस दिनमा चर्चहरूमा असामान्य रूपमा ठूलो मान्छे। त्यहाँ पनि वर्ष भर भगवानलाई सम्झना पनि छन्। र सबै किनकि प्रभुको बप्तिस्मा पानी सहिष्णुता हो। सबैलाई कम्तिमा केहि पवित्र पानी चाहिएको छ, जसको अद्भुत गुणहरूको बारेमा धेरै भनिएको छ। तिनीहरू यसो भन्छन् कि यो औषधि पिउन यसको लायक छ ताकि उनीहरूले राम्रो काम गर्दछ। तर के यो वास्तवमा यति दिनको बारेमा उल्लेखनीय छ?
प्रभुको बप्तिस्मा ओर्थोडक्स ख्रीष्टियनहरूका लागि तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवकाश हो। ईस्टर र क्रिसमस भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्ता उत्सवमा इपिफानी भनिन्छ, किन बप्तिस्माको अनुकरणको क्रममा जो यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीहमा सञ्चालन गरिएको थियो , एक ढोकामा उभिन्छ, र आकाशबाट परमेश्वरको आवाज आयो: "यो मेरो छोरा, मेरा प्रिय।" यो विश्वास छ कि त्यो क्षणमा परमेश्वरको ईश्वरीय सारणी प्रकट भएको थियो, जसमा येशू ईश्वर हुनुहुन्छ, स्वर्गबाट आवाज पिता ईश्वर को प्रतिनिधित्व गर्दछ, र ढोका पवित्र आत्मा को प्रतीक हो।
रूसमा, प्रभुको बप्तिस्मा धेरै परम्पराहरु संग ओभरगन्ड गरियो। त्यसोभए, यस दिन यो ताजा बिरुवा पानीको साथ बर्फ-प्वाइन्टमा डुबाइन्छ। यस समयमा, सर्दी जाडोको समयमा सबैभन्दा बलियो छ, तर यसले विश्वासीहरूलाई रोक्न सक्दैन। पवित्र पानी न केवल ठण्ड लाग्दैन, तर यो पुरा वर्षका लागि रोगहरूको पनि रक्षा गर्दछ।
पहिले नै उल्लेख गरिएको छ, पवित्र पानी चर्च नजिक नजिकै एक तालाबमा बप्तिस्मा लिइरहेको छ। जहाँ कुनै नदीहरू छन् र कुनै क्रस-कट्टर आइस-प्वाल काट्न सक्दैन, पानी जम्मा विशेष जलाशयमा सञ्चालन गरिन्छ। तर धेरैले तर्क गर्छन् कि यस दिनको चिसो पानी साँच्चै ट्याप अन्तर्गत घरमा शाब्दिक भर्ती गरिन्छ। एक दिनको लागि पानी सबै पानी निकायहरूमा पवित्र हुन्छ, यो केवल एकत्र गर्न र यसलाई सुरक्षित गर्न पर्याप्त छ। यदि तपाईंले मन्दिरमा नलगाउनुभयो भने, तर घरमा, त्यसपछि तपाईंलाई बप्तिस्मा अघि रातो गर्न आवश्यक छ।
एपिफनी जनवरी 19(पुरानो शैली अनुसार6जनवरी) मा मनाइएको छ। क्रिसमस सम्म एपिफनीको अवधि पवित्र हप्ता भनिन्छ। यस समयमा, विश्वास अनुसार, दुष्ट आत्माहरू नरकबाट जारी गरिएका छन्। पवित्र हप्तामा अनुमान लगाउन र माछाहरू व्यवस्था गर्न - परिचित गर्न। यो कि mummers को रूप मा प्रयोग गरे, शैतानहरू कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, र यसको विपरीत, बुराई-डोरी आफ्नै आफ्नै लागि गल्ति र चोट लगाउँदैन। यो ध्यान दिनु पर्छ कि चर्चले पवित्र हप्तामा धेरै लोक मनोरञ्जनको निन्दा गरेको छ। सम्भवतः तिनीहरू शताब्दीको गहिराइबाट आए।
बप्तिस्मा चर्चमा एक विशेष सेवा र क्रूसको प्रलोभनमा चिन्हित गरिएको छ। जनवरी 18 को साँझ ईपिफनी ईभ सुरु हुन्छ , जब यो छिटो स्वीकार गरिन्छ। ईश्वरीय सेवा पछि, जुन जनवरी 190 मा बिहानको अन्त्य हुन्छ, यो प्रभुको बप्तिस्मामा एकअर्कालाई बधाई पठाउन सम्भव छ। अब पद बधाई लोकप्रिय छ, जुन तपाईं पोस्टकार्डमा लेख्न सक्नुहुनेछ वा एसएमएस द्वारा पठाउन सक्नुहुन्छ।
बप्तिस्माले प्रभुको बप्तिस्मा:
हामी कविता संग हरेक घरमा कविताहरू पठाउँदछौं।
आज पवित्र पानी संग
हामी स्वास्थ्य र भाग्य ल्याउनेछौं।
पार्टी सबै कठोरता हो,
हामी हाम्रो हातमा तर्क गर्छौं,
ठुलो एपिफनी मौसममा
विश्वास हृदयमा बलियो भयो!
र मान्छेको क्यालेन्डर अनुसार, बप्तिस्मा कृषि वर्षको सुरुवात हो। यस दिन, मौसम अनुसार, वर्ष फलदायी हुनेछ। तारिख राती रात जामुन र भाँडाको राम्रो फसललाई परास्त गरियो, दिनको हिउँमा घिमिरे र सामान्य मौसममा मौसमको अर्थ भनेको अनाजको उच्च उत्पादन हुनेछ। तर संकेतहरूमा एक स्पष्ट र न्यानो बप्तिस्मा दिनको अर्थ भनेको कटनी खराब हुनेछ।
यो प्रसोधन हो ... प्रसोधन को सार र वर्णन। ईस्टर जगेडा
दिमित्री सोलुंस्की को मन्दिर ब्लगशिश मा - साँचो विश्वास को आइलेट
सबैभन्दा बलियो प्रार्थना भनेको हृदयबाट आएको हो
एङ्ग्लानिज्ज ग्रेट ब्रिटेनको आधिकारिक धर्म हो।
Kievan रस को राजनीतिक र सामाजिक-आर्थिक विकास
सामाजिक मान्यता पनि को सिस्टम मा व्यवस्था को नियम: आफ्नो भूमिका र संरचना
कसरी एक किशोरी संग एक साधारण भाषा फेला पार्न? किशोरों सञ्चार: मनोविज्ञान
Penitentiaries - यो ... penitentiary सिस्टम
लेभिनको चित्रकारी "स्प्रिंग। ठूलो पानी »: वर्णन र संरचना
Nikolaevka युक्रेनको। Nikolaevka युक्रेनको को गाउँमा - मानचित्र
स्तनपान गर्भावस्था को समयमा अनुज्ञेय छ कि छैन भनेर
पेन्सन "परी3'(Anapa / Dzhemete): विवरण, फोटो र समीक्षा